हुन्डी कारोवारी एक जना एस.एस.बी.को नियंत्रणमा – BSN.COM.NP
By Province 1 One	 On Jul 7, 2021 0
सुनसरी / हुन्डीको कारोवार गर्ने एक जनालाई नौ लाख नगद नेपाली रुपैया र एक थान स्पलेण्डर मोटरसाईकल सहित भारतीय सिमा सुरक्षा बल एस.एस.बी. को टोलीले पक्राउ गरेको छ ।
भारत बाट मोटरसाईकलमा किराना सामन सहित नेपाल आउदै गरेकाहरुलाई चेक जाच गर्ने क्रम्मा फ़ुल्काहा नजिक बाट सुनसरीको देवानगंज बस्ने वर्ष २८ को प्रकाश पाल लाई नगद सहित एस.एस.बी. ले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेको पाल ले किराना सामन बोकेको झोला भित्र कालो रंगको प्लास्टिकले बेरेर रखेको अवस्थामा नै लाख नौ सय ४५ नेपाली रुपैया फ़ेला परेको हो । उक्त पैसा भारतको फ़ुलकाहा बस्ने हुन्डी कारोवारी शरवन कुमार बाट लिएर नेपाल ल्याउदै गरेको अनुसंधान बाट खुलेको छ ।